Vakiantsika ao amin'ny taratasy ho an'ny hebreo fa ny finoana dia ny fahatokiana mafy ny zavatra antenaina, ny finoana ny zavatra tsy hita (Schlachter 2000). Sahala amin'ireo sary ireo, ny finoana dia maneho ny fihetsikay amin'ny zava-misy izay tsy ho takatry ny saintsika fotsiny. Ny finoana fa misy Andriamanitra dia avy amin'ny fihainoana ary, noho ny fanampian'ny Fanahy Masina, dia tonga finoana matanjaka. Ny zavatra rentsika momba ny toetran'Andriamanitra sy ny toetrany izay hita ao amin'i Jesosy Kristy dia mitarika antsika hametraka ny fitokisantsika aminy sy ny fampanantenany, na dia mbola miandry ny fahatanterahany tanteraka aza. Ny fahatokisana an'Andriamanitra sy ny teniny dia mahatonga ny fitiavana azy mazava tsara. Miaraka isika dia lasa mpitondran-tena amin'ny fanantenana momba ny fiandrianan'Andriamanitra, izay handresy ny ratsy rehetra amin'ny tsara, izay hanala ny ranomaso rehetra ary hanitsy ny zavatra rehetra.